Andro: 8 Janoary 2020
Ulukışla Boğazköprü Line Km: 55 + 185 Miorina tanteraka Noho ny volavola Ny Tale Didy Fividianana Fotom-bidy faha-2 (TCDD) an'ny Railway (TCDD) an'ny Tiorka (TCDD) dia manana sanda voafetra amin'ny 2019 617651 12.036.838,39 TL ary ny vidiny eo ho eo dia TL 17.967.977,59. [More ...]
1. Tamin'ny volana lasa teo dia nomena ny orinasam-pifandraisan-davitra Konya sy ny Fiaran-tsena Metro ny orinasa sinoa CRRC tamin'ny 1.2 tapitrisa dolara (7 miliara 900 tapitrisa TL). Tamin'ny herintaona tany Istanbul 272 [More ...]
Fivoriambe jeneralin'ny faritany tamin'ny fivoriana faharoa tamin'ny 2020 Governora Salih Ayhan sy Ben'ny tanànan'i Sivas Hilmi Bilgin no nanatrika. Ayhan sy Bilgin dia niteraka olana maro tao Sivas [More ...]
Ny kaominin'ny Van Metropolitan sy ny talen'ny Sampana Polisy misahana ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'ny polisy dia mifehy fiara fitateram-bahoaka manerana ny tanàna. Lefitry ny sekretera jeneralin'ny Asset monisipaly Metropolitan. Dr. Metropolitan miaraka amin'i Ali Özvan [More ...]
Ben'ny tanànan'i Ordu Metropolitan Mehmet Hilmi Guler, distrikan'i Kabaduz ao amin'ny Plateau Çambaşı naorina tamin'ny fanadihadiana hita tao amin'ireo lakandrano. Ny bungalow, izay nosokafana vao haingana tao amin'ny Çambaşı Plateau, dia afaka nandositra ny adin-tsaina. [More ...]
Ny asa dia tanterahina amin'ny làlana mifandray amin'ny Bülent Ecevit Bridge Interchange, izay naorin'ny Kaominin'i Manisa Metropolitan any Salihli. Kurtuluş Kuruçay, Lehiben'ny departemantan'ny fanamboarana ny lalana ao Manisa Metropolitan [More ...]
Tamin'ny fiaraha-miasa ny Gaziantep Metropolitan Munisipaly, Chamber of Drivers and Automobiles, no nahitana voalohany tamin'ny sehatry ny fitaterana Smart. "Smart Taxi la miaraka amin'i Fatma Şahin, Ben'ny tanànan'ny Metropolitan, Ünal Akdoğan, Filohan'ny Chamber of Drivers and Automobiles [More ...]
SAKBIS Naty 8 Taona tamin'ny in-57 volana
Ny olom-pirenena dia maneho fahalianana be amin'ny SAKBicycleS Smart bisikileta bisikileta izay ampiharin'ny Kaominin'i Sakarya Metropolitan. Mpandrindra 15 amin'ny SAKBİS, naorina amin'ny faritra maro ao an-tanàna ary manompo any amin'ny toerana 8 [More ...]
Fivoriana fandrindrana ny fitaterana izay natao tany Kayseri
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç, satria amin'ny sehatra fitaterana rehetra manome kalitao serivisy tsara kokoa, hoy izy ireo dia nanandrana. Ny Ben'ny tanàna Büyükkılıç dia nilaza izany [More ...]
Miaro ny tontolo iainana ny IMM amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-baravarankely amin'ny fatiantoka
Ny fivondronan'ny Istanbul Metropolitan dia manangona ny fandaniam-bato izay mandalo ny Bosporus amin'ny fomba voafehy ary mamerina azy ireo amin'ny toe-karena. Hatramin'izao, ny fako 1 tapitrisa santimetatra fako azo avy amin'ny solika dia nohodinina tamin'ny tetikasa momba ny tontolo iainana. Samy Istanbul sy [More ...]
Atrikasa fitaterana Antalya dia hotehirizina
Hisy ny vahaolana ho an'ny olan'ny fitaterana Antalya miaraka amin'ireo singa ao an-tanàna. Ny ben'ny tanàna ao amin'ny Antalya Metropolitan munisipalista Muhittin Böcek, Antalya, nanao drafitra, fitsipika, ny maha-izy azy dia mitohy miaraka amin'ny tanjona hanangana tanàna. Amin'izany toe-javatra izany, misy distrika 7 [More ...]
Ny fitaterana isan'andro isan'andro ao Metropolitan ka Ivotoerana Ski Saklıkent
Italiana mifanena amin'ny ranomandry ny Italiana. Ny kaominina Metropolitan dia manome serivisy fitateram-bahoaka mandritra ny 7 andro ho an'ny Ivotoerana Ski Saklıkent, iray amin'ireo ivon-toeram-pizahan-tany ririnina lehibe indrindra ao Antalya. 2 400 haavo isan'andro isan'andro Antalya [More ...]
Erzincan Trabzon Railway dia tsy misy olana
Erzincan-Gumushane-Trabzon tetik'asa izay mitohy amin'ny fanatanterahana ny mpikambana ao amin'ny Filankevitra monisipaly Trabzon Metropolitan ary mpikambana ao amin'ny Tranetra Tranzoro-Erzincan, Saban Bulbul, ny volavolam-panorenana dia ho vita aorian'ny fampiharana ny tetikasa, hoy izy. Nightingale, “miverina [More ...]
Nandalo 209 tapitrisa ny mpandeha tamin'ny taona lasa
Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Minisitra Cahit Turhan, seranam-piaramanidina manerana an'i Torkia tamin'ny taon-dasa, dia nilaza fa mivantana fitaterana mpandeha amin'ny 209 tapitrisa mpandeha 92 548 arivo ny tolotra omena. Minisitry ny Turhan, Fahefam-panjakana momba ny seranana (DHMİ) [More ...]